ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 46.3 ဘွားတင်
ကိုနဗနအဘွားက၊ သိပ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲနော်။ ကျွန်မအဘွားလည်း ၁၁ယောက်မွေးခဲ့တယ်။ ကိုနဗနပြောသလိုဆိုရင်၁၀နှစ်နီးပါးက ဗိုက်ကြီးပြီး မီးတွင်းထဲမှာနေခဲ့တာနော်။ ကိုနဗန အဘွားရဲ. ချမ်းချမ်းသာသာဘ၀နဲ.ကော ပန်းရောင်းခဲ့တဲ့ ဘ၀နဲ. ကော။ လောကဓံတရားကို သတ္တိရှိရှိရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ခဲ့တာ တကယ်ခံစား လေးစားမိပါတယ်။
အဲဒီလို အကြောင်းအရာမျိုးတွေ ကြားရရင် အားရမိပါတယ်။
သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် အနစ်နာခံ၊ အပင်ပန်းခံခဲ့တဲ့ အဖွားကို၊ သွားလေသူ ကျနော့်အမေနဲ့ တူလို့ အမေ့ကို အရမ်းသတိရ တမ်းတမိပါတယ်..။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် မရခဲ့၊ လင်ယောင်္ကျားရဲ့ သမရိုးကျ အကာအကွယ်လည်း မရခဲ့ရှာတဲ့ အဖွားရဲ့ ဒုက္ခတွေ အတွက် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်..။ သူ့ခမျာ ကလေးတွေ မွေးဖို့နဲ့ အဲ့ဒီကလေးတွေ လူလားမြောက် ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့လောက်သာ လူ လာဖြစ်ရသလိုပဲ..။
အကို့ အဖွားကို လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်။
သူတို့မိန်းမတွေကောင်းစားဖို့ပဲ တကယ်ဖြစ်သွားလား။ ဒါမှမဟုတ် အမေကိုရော သားမယားကိုပါ ညီမျှစွာ ခံစားစေလား ရေးပါဦးဗျာ။ (ယောင်္ကျားပီပီ စပ်စုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ၊ အတုယူတန် ယူရအောင်ပါ )
အကို့ အဖွားရဲ့ သားသမီးတွေချစ်ပုံ